Akụkọ - Uru ọgwụ anụ ọhịa dị ala yana ihe egwu dị na ya. Mmepe nke ihe ọkụkụ na ahịhịa nwere ike nyere aka dozie nsogbu dị na ụlọ ọrụ
Uru ọgwụ anụ ọhịa dị ala yana ihe egwu dị na ya. Mmepe nke ihe ọkụkụ na ahịhịa nwere ike nyere aka dozie nsogbu dị na ụlọ ọrụ
Na mkpokọta, enwere ụdị ọgwụ ọgwụ China dị 12,807 na ụdị anụmanụ anụmanụ 1,581, ihe ruru 12%. N'ime akụ ndị a, ụdị anụ ọhịa 161 nọ n'ihe ize ndụ. N'ime ha, a na -ewere mpi rhino, ọkpụkpụ agụ, musk na bile ntụ dị ka ọgwụ ọgwụ anụ ọhịa na -adịghị ahụkebe. ” Ọnụ ọgụgụ ụfọdụ anụ ọhịa nọ n'ihe ize ndụ, dị ka pangolins, agụ na agụ owuru, agbadala nke ukwuu n'ihi mkpa ọgwụ ọgwụ, Dr. Sun Quanhui, onye sayensị na World Animal Protection Society kwuru, na nzukọ ọmụmụ ọkachamara nke 2020 nke “Ọgwụ. maka mmadụ ”na Nọvemba 26.
N'ime afọ ndị na -adịbeghị anya, nke azụmaahịa mba ụwa na ọdịmma azụmahịa na -akwalite, anụ ọhịa na -adịghị ahụkebe na nke nọ n'ihe ize ndụ na -echekarị nrụgide nlanarị ka ukwuu, na nnukwu oriri ọgwụ ọgwụ ọdịnala bụ otu n'ime ihe dị mkpa kpatara mkpochapụ ha.
Sun kwuru, "mmetụta ọgwụ anụmanụ nke anụ ọhịa karịrị akarị." N'oge gara aga, anụ ọhịa anaghị adị mfe ịnweta, yabụ, ọgwụ ọgwụ dị ụkọ, mana nke ahụ apụtaghị na mmetụta ọgwụ ha bụ nke anwansi. Ụfọdụ ebubo azụmaahịa ụgha na -ejikarị ụkọ anụ ọhịa anụ ọhịa eme ihe dị ka ebe ire ere, na -eduhie ndị na -azụ ahịa ịzụta ngwaahịa ndị metụtara ya, nke na -abụghị naanị na -eme ka ịchụ anụ ọhịa na ịchụ nta anụ ọhịa dọba ha n'agha, kamakwa ọ na -akwalitekwa agụụ maka anụ ọhịa ọgwụ.
Dị ka akụkọ ahụ si kwuo, ngwa ọgwụ ndị China gụnyere ahịhịa, ọgwụ ịnweta ọgwụ, na ọgwụ anụmanụ, nke ọgwụ ahịhịa dị ihe dị ka pasenti 80, nke pụtara na ọtụtụ ọgwụ ọgwụ anụmanụ China nwere ike dochie ọtụtụ nsonaazụ ọgwụ anụ ọhịa. N'oge gboo, ọgwụ anụ ọhịa adịghị adị ngwa ngwa, yabụ na ha ejighị ya mee ihe ma ọ bụ tinye ya n'ọtụtụ usoro nri. Ọtụtụ nkwenkwe ndị mmadụ gbasara ọgwụ anụ ọhịa sitere na “ụkọ ihe bara uru” echiche na -adịghị ahụkebe ọgwụ bụ, ka ọ na -adịkwu irè ma nwekwuo uru.
N'ihi echiche ndị ahịa a, ndị mmadụ ka dị njikere ịkwụkwu ụgwọ maka ngwaahịa anụ ọhịa sitere n'ọhịa n'ihi na ha kwenyere na ha dị mma karịa anụmanụ a na -akọ ugbo, mgbe ụfọdụ mgbe anụ ọhịa ndị a na -akpa n'ahịa adịlarị n'ahịa maka ebumnuche ọgwụ. Ya mere, mmepe nke ụlọ ọrụ na -ahụ maka ọrụ anụ ọhịa na -emepụta ọgwụ agaghị echebe anụ ọhịa dị ize ndụ n'ezie, ọ ga -abawanyekwa agụụ maka anụ ọhịa. Naanị site na mbenata agụụ maka oriri anụ ọhịa ka anyị nwere ike nye nchekwa kachasị dị irè maka anụ ọhịa nọ n'ihe ize ndụ.
China na -etinye oke mkpa mgbe niile na nchekwa nke anụ ọhịa ọgwụ na -egbu egbu. N'ime ndepụta ọgwụ ọgwụ anụ ọhịa n'okpuru nchedo igodo steeti, ụdị anụmanụ anụmanụ iri na asatọ n'okpuru nchedo igodo steeti ka edepụtara nke ọma, e kewara ha na klas ọgwụ nke mbụ na nke abụọ. Maka ụdị ọgwụ anụmanụ anụ ọhịa dị iche iche, e nwekwara usoro ojiji na nchedo klaasị nke I na nke ọgwụ ọgwụ II.
N'ihe dị ka 1993, China machibidoro ịzụ ahịa na iji ọgwụ rhino na agụ agụ, wee wepu ọgwụ ndị metụtara ya na pharmacopoeia. Ewepụrụ bear bile na pharmacopoeia na 2006, ewepụrụ pangolin na mbipụta kachasị ọhụrụ na 2020. Na COVID-19, National People's Congress (NPC) ekpebiela ịtụgharị Iwu Nchebe Anụmanụ nke Ndị Republic of China. (PRC) maka oge nke abụọ. Na mgbakwunye na machibido iri anụ ọhịa, ọ ga -ewusi mgbochi mgbochi ọrịa ike yana nlekọta mmanye iwu nke ụlọ ọrụ ọgwụ anụ ọhịa.
Maka ụlọ ọrụ na -emepụta ọgwụ, ọ nweghị uru dị n'ịmepụta na ire ọgwụ na ngwaahịa ahụike nwere ihe sitere na anụ ọhịa dị n'ihe egwu. Nke mbụ, a na -enwe nnukwu arụmụka gbasara iji anụ ọhịa nọ n'ihe ize ndụ eme ihe dị ka ọgwụ. Nke abuo, inweta ihe eji eme ihe na-ahazighị ezi na-eduga n'ịdị mma nke akụrụngwa; Nke atọ, ọ na -esiri ike imepụta mmepụta ahaziri ahazi; Nke anọ, iji ọgwụ nje na ọgwụ ndị ọzọ eme ihe n'ubi na -eme ka o sie ike ịhụ na akụrụngwa nke anụ ọhịa dị n'ihe ize ndụ. Ihe ndị a niile na -eweta nnukwu ihe egwu na atụmanya ahịa nke ụlọ ọrụ ndị metụtara ya.
Dabere na akụkọ "Mmetụta nke ịhapụ ngwaahịa anụ ọhịa nọ n'ihe ize ndụ na ụlọ ọrụ" nke World Society for Protection of Animals and Pricewaterhousecoopers bipụtara, ihe ga -ekwe omume bụ na ụlọ ọrụ nwere ike na -arụsi ọrụ ike wee nyochaa ahịhịa na ngwaahịa sịntetik iji dochie ngwaahịa anụ ọhịa nọ n'ihe ize ndụ. Nke a abụghị naanị na -ebelata ihe egwu dị na azụmaahịa nke ụlọ ọrụ, kamakwa ọ na -eme ka ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ na -adigide. Ka ọ dị ugbu a, erela ihe nnọchi anya anụ ọhịa dị n'ihe ize ndụ maka iji ọgwụ eme ihe, dị ka ọkpụkpụ agụ agụ, musk wuru na bile beel, ka ahịa ma ọ bụ na -anwale ọnwụnwa ụlọ ọgwụ.
Anụ ọhịa bea bụ otu n'ime ahịhịa ndị a na -ejikarị anụ ọhịa. Agbanyeghị, nyocha egosila na ụdị ahịhịa dị iche iche nke China nwere ike dochie bile bile. Ọ bụ omume a na -apụghị izere ezere na mmepe nke ụlọ ọrụ ọgwụ na -emepụta n'ọdịnihu ịhapụ anụ ọhịa ma jiri nlezianya nyochaa ọgwụ mkpá akwụkwọ na ngwaahịa sịntetik. Ụlọ ọrụ ndị dị mkpa kwesịrị ịgbaso ntuziaka iwu obodo nke ichekwa anụ ọhịa dị ize ndụ ọgwụ, belata ịdabere na anụ ọhịa nwere ọgwụ, ma na -akwalite ikike mmepe ha na -adigide mgbe ha na -echebe anụ ọhịa ọgwụ nwere ike ịgwụ site na mgbanwe ụlọ ọrụ na mgbanwe teknụzụ.